N'aka ekpe: Mepụta, Họrọ, Mee ọ rụọ ọrụ, ma tụọ ndị na-emetụta Instagram | Martech Zone
Wednesday, November 22, 2017 Fraịdee, Nọvemba 24, 2017 Douglas Karr
Lefty bu ihe mbu nke ndi mmadu na - enyere aka ichota ihe ndi mmadu choro. N'ịbụ onye onye injinia ihe nchọta ihe nchọta Google mbụ gara aga, ndị ọrụ mmepe Lefty arụ ọrụ afọ 2 iji weta usoro ngwụcha kachasị ike na ndị na - eme ihe ike na Instagram.
Lefty emepeela sọftụwia ha nye ọha na eze ụdị dị ka Shiseido ma ọ bụ Uber na-eji ya. Nke a bụ obere vidiyo na-egosi azịza ha.
Lefty na-ewuli profaịlụ impencer nke dabere na ọdịdị ala, ọdịmma, mkpado, afọ na asụsụ a na-asụ - n'etiti 20 mpaghara ndị ọzọ. Ngwaọrụ AI ha kwadoro gbanwere ihe okike gị na ebumnuche gị n'ime atụmatụ dị mma nke profaịlụ mmetụta dị mkpa. Ma, nke kachasị mkpa, enwere ike tụọ mkpọsa gị n'ụzọ ziri ezi.
E wezụga ịnwale ikpo okwu, jide n'aka na ibudata akwụkwọ ọcha dị egwu nke Lefty na ịmepụta Mgbasa Mgbasa Ozi. Akwụkwọ ọcha ahụ na-akọwa usoro ihe anọ dị mkpa ma na-enye nkọwa na ndụmọdụ niile iji mee ka mgbasa ozi influencer gị gaa nke ọma, gụnyere:
Mepụta - otu esi emepụta echiche na-emetụta.
họrọ - otu esi achọta ihe dị mkpa.
rụọ ọrụ - otu esi emepụta mmekọrịta iwu na gị influencer.
Tụọ - otu esi emejuputa ihe ngosi di nkpa iji gosiputa mkpọsa gị.
Nwere ike ibudata White Akwụkwọ ebe a:
Akwụkwọ Lefty nke White Lefty na Mgbasa Ozi Mgbasa
Tags: chọta ndị na-eme iheesi chọta influencersmmetụta mgbasa oziinfluencer iwuNdị na-emerụ ahụisi ihe ngosi ngosikpikpisaka ekpe